Umgangatho we-FGV yohlobo lwe-DGV Cheder yeSilayina | Yongeza
Ikhaya > Iimveliso > Ukutyibilika kololiwe > Isilayidi seDrawer
Umgangatho weHydraulic hinge hinge hinge kwi-3D ye-v-moloment v - Yongeza
Umgangatho wokuvala okuthambileyo kwi-3 Yongeza
I-hydraulic hinge i-hinge | Yongeza
Umgangatho osemgangathweni webhola enesitayile esinee-slider | Yongeza
I-FGV yohlobo lwesilayidi se-FGV yedrawer xa ithelekiswa neemveliso ezifanayo kwintengiso, ineengenelo ezingenakuthelekiswa nanto ngokwendlela yokusebenza, inkangeleko yokusebenza kwimarike. . Inkcazo yesilayidi se-FGV sohlobo lweDrawer inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.
Iphepha leKhabhinethi yeKhabhinethi yeKhabhinethi ye-FGV yeDrawer Sheare kwi-Operth Shoreware nge-Craft ebalaseleyo kunye nexabiso elisebenzayo.
I-FGV yohlobo lwe-FGV Slide
Ipakethi njengemfuno yakho. Iindleko ezongezelelweyo ziya kucelwa ukuba kupakishe olukhethekileyo njengebhokisi yemibala, ukupakisha iBlister, kunye NOlwane.
Malunga neentsuku ezingama-25 ukuya kwengama-6 ngokusekwe kwinani lakho le-oda
I-500,000 yeeseti / inyanga
T / t, l / c okanye abanye ngothetha-thethwano.
Siza kunika isampulu yasimahla yokutshekishwa komgangatho.
Ngoncedo lwale mveliso, imveliso inokugqitywa ngendlela ekhawulezayo necocing, enokuqinisekisa ukugqitywa kweprojekthi kunyaka obekiweyo.
1.Yintoni ikota yokuhlawula?
Ngokwesiqhelo t / t, l / c okanye abanye ngothethathethwano.
2. IXESHA LOKUGQIBELA?
Singahambisa imveliso malunga neentsuku ezingama-20 ukuya kwengama-6 ezixhomekeke kwiimveliso ezahlukeneyo, siya kucwangcisa imveliso ukuba sifumene idipozithi yakho. Ukuba ubuza umhla wokuhambisa kwangaphambi kokuhanjiswa, siya kuxoxa ukuba sizinze kwaye silungiselele ixesha langaphambili.
3.Uyintoni indawo yokulayisha isikhongozelo sama-20 kwaye kunokwenzeka ukulayisha imveliso yokuxuba kwisitya esinye?
Umthamo wokulayisha max kuxhomekeke kwiimveliso kwaye sendlela yokupakisha ubuziwe, siya kuqinisekisa iinkcukacha emva kokuba uqinisekise iodolo, umxube kwi-contain enye yamkelekile.
Isiqinisekiso sokuthiya kwe-1
I-STRAFFIC: Sithembisa iodolo yakho iya kuthunyelwa ngaphakathi kwinyanga enye emva kokufumana idipozithi. Ngexesha lexesha elixakekileyo, ixesha lethu elinokuthi lifunelwe lihlengahlengiswa ngokufanelekileyo. Ukoneliseka kwakho ngokupheleleyo kubaluleke kakhulu kwiqela lethu.
3.Ulo nzuzo: Sibonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kumanqaku ohlukeneyo exabiso eliya kwenza kube lula kuwe ukulungiselela iimfuno zoluhlu olubanzi nabakhoyo abathengi.
4. Inkonzo esetyenzisiweyo: Siqokelele umthombo omkhulu phantse phantse i-hardwart ye-hardware ehambelana nayo yonke i-chinare, oku kusenza sikwazi ukukunika iZisombululo zexabiso elongeziweyo. Nayiphi na inkonzo eyenzelwe ngokwezifiso sinokuxhasa oko kunokukunceda ukhulise ukuhamba ishishini.
I-Shanghai yongeza iHardware Ho. I-LTD ngu Umthengisi wezixhobo zeflethi zeZiseko zeZiseko zeZiseko zeZiseko zeZiseko zePright uneminyaka emininzi yamava. Sinika ngaphezulu kwamawakawaka eemveliso kubandakanya uluhlu olupheleleyo lwe-hardware efana ne-hinge, isilayidi, isiphatho, isitshixo, umlenze wetafile kunye nezinye iimveliso ezinxulumene noko. Sifumene imvume njenge China, iYurophu neMigangatho esemgangathweni yaseMelika. Sinabasasazi abaninzi kwihlabathi liphela kwaye banandipha igama eliphezulu e-US, eYurophu naseAsia. Umgangatho othembekileyo, inkonzo eguqukayo kunye ne-Revatures entsha yi-Tenet yethu. Sisoloko sisebenza ukuphucula kwaye rhoqo kudale ixabiso lamaqabane ethu. Ngokusekwe kumava ethu esityebi, Iqela labasebenzi kunye nenkqubo yenkonzo enoxanduva, sijongwa njengabathengi ' Ukuthenga i-ofisi yase China. Siyavuya kuba nemizobo yakho kunye neesampuli zokuphuhlisa iimveliso ezintsha, kwaye siya kudibanisa izixhobo zeshishini ngokufanelekileyo kwaye silawule iindleko ngokungqongqo ukwenza inzuzo ngakumbi kubathengi. Silindele ngokunyanisekileyo ukuba sisebenzisane nawe. Intanda-bulumko yethu yeshishini ukuba i-a Uhlobo oluthembekileyo lwezixhobo zefreyiti kunye nokudala ixabiso kubathengi bethu, abathengisi, kunye noluntu. Uphuhliso lwethu luvela ekufumaneni okungafunekiyo kunye nokungazinzi. Sibonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kumanqaku ohlukeneyo exabiso eliza kwenza ukuba kube lula kuwe ukulungiselela iimfuno zoluhlu olubanzi nabathengi abakhoyo. Yongeza kwimfundo ekhethekileyo ekuboneleleni ngeemveliso ezinendleko zenkonzo esemgangathweni. Nanini na xa ufuna inkxaso yemveliso, iisampulu, amaxesha emveliso ngokukhawuleza, ukuthunyelwa kwemali ... Yongeza uhlala apha kuwe! Nxibelelana nathi ngoku ukuqala ukufunyanwa.
Umhlophe omhlophe, ubisi amhlophe, brown, mnyama, ngwevu
I-0.6 / 0.65 / 0.75 / 0.85 / 0.9/100 / 1.0 / 1.1mm
I-10 "/ 12" / 14 "/ 16" / 18 "/ 20" / 22 "/ 24"
1. Ivili eliqhelekileyo (ABS)
2. Isondo eliqhelekileyo (i-POM)
3. I-GEP yengxolo (HBTE)
4. Ukuthi cwaka ivili lengxolo (ABS)
5. Ukuthi cwaka ivili lengqokelela (hbte)
Uvavanyo lwe-SGSS STGS& Ngaphezulu kwe-50 000 yovavanyo olusondeleyo
Ipakethi njengemfuno yakho. Iindleko ezongezelelweyo ziya kucelwa ukuba kupakishe olukhethekileyo njengebhokisi yemibala, iBlister ukupakisha, kwaye njl.
Iisampulu ziyakulungela ukuthumela malunga neentsuku ezintathu zomsebenzi ngokubonisa ukuba i-DHL, i-UPS, TRT, FedEx okanye i-EMS.
1.made yentsimbi eqengqelekayo ye-haff-craft ye-Craft, eSebenzisayo i-craft yomgubo, ukunganyangeki kukutsala kwaye akukho lula ukupheliswa.
Uyilo lwe-2.simple uyila, izilali ezibini zesilayidi, thatha indawo encinci kwaye uphucule ukusetyenziswa kwendawo.
3.Ngaphononongo olusemgangathweni ongqongqo ngokungqongqo, kunokutsalwa ngokulula ngaphezulu kwama-50 000, kwaye unokuxhasa izinto ngobunzima obungaphantsi kwe-25 kg.
4.Ukukhetha ukukhetha, sinokubonelela ngeevili zeevili zezinto ezahlukeneyo zokufanele ukukhetha, ukuqinisekisa ukuthoba ngaphandle kwengxolo.
5.Umbala weewotshi ezininzi zinokwenziwa ngokwezifiso, kwaye ubukhulu beento ezahlukeneyo zinokubonelelwa ukuba zifezekise iimfuno zabathengi kumanqanaba ahlukeneyo.
Sinabasasazi abaninzi kwihlabathi liphela kwaye banandipha igama eliphezulu e-US, eYurophu naseAsia. Umgangatho othembekileyo, inkonzo eguqukayo kunye ne-Revatures entsha yi-Tenet yethu. Sisoloko sisebenza ukuphucula kwaye rhoqo kudale ixabiso lamaqabane ethu.
Ngokusekwe kumava ethu esityebi, iqela elinobuchule kunye nenkqubo yenkonzo enoxanduva, sijongwa njenge-ofisi yokuthenga kwabathengi eTshayina. Siyavuya kuba nemizobo yakho kunye neesampuli zokuphuhlisa iimveliso ezintsha, kwaye siya kudibanisa izixhobo zeshishini ngokufanelekileyo kwaye silawule iindleko ngokungqongqo ukwenza inzuzo ngakumbi kubathengi. Silindele ngokunyanisekileyo ukuba sisebenzisane nawe. Ifilosofi yethu yeshishini kukuba luhlobo oluthembekileyo lwezixhobo zefanitshala kunye nokudala ixabiso kubathengi bethu, abathengisi, kunye noluntu. Uphuhliso lwethu luvela ekufumaneni okungafunekiyo kunye nokungazinzi.
Nxibelelana nathi ngoku ukuqala ukufunyanwa.
Singazi njani ngakumbi ngenkampani yakho kunye nemveliso ephambili?
Singumthengisi wezixhobo zefanitshala yefanitshala, ezazikho ezikhethekileyo kwizixhobo zefanitshala iminyaka emininzi, kwaye owongeziweyo "uyathengisa kakuhle kumazwe amaninzi anokwazi ukubonelela ngeemveliso zakho eziphezulu kunye nenkonzo yobungcali. Iimveliso zethu eziphambili zezi: i-hinge, isilayidi, isiphatho, inkxaso, isikrelem, umlenze we-Screen, ezinye ii-secket. Ukuba liqabane lethu elide, siya kukuvuyela ukukunceda ukuba uchithe intengiso yakho kwaye unyuse amandla akho entengiso.
Ngaba uyinkampani yentengiso okanye umvelisi?
Siyinkampani yokuthengisa ngaphandle yokuthengisa ngaphandle, kwaye singumzi-mveliso onomzi mveliso wemveliso ephambili, ukuze kunikezelwe iintlobo zemveliso ukuze kufezekiswe iimfuno zentengiso kunye nendala, siqokelele umthombo omkhulu phantse I-Shripies ehambelana nefani yefanitshala e-China, oku kusenza sikwazi ukunika nasiphi na isisombululo esifanelekileyo, sivavanya amaxabiso ahlukeneyo kumanqanaba oqulunqiweyo kwaye sicebise kwi-Ofisi yeThutyana, kunye nezinto ezintsha zenziwa Ixesha, kwaye sinokubonelela ngenkonzo yokuzalisa ngokwemfuno yakho eyodwa. I-Contith ikhethekileyo ekunikezeleni izisombululo ze-STOPLE Ngexabiso elingcono, umgangatho ophezulu, olona nkonzo, ukongeza kukhetho lwakho oluhle, unokuxhomekeka kuthi!
Leliphi inani le-odolo le-oda ye-oda yentengiso yokuqala?
I-Moq eyahlukileyo kwinto nganye kwaye ixhomekeke kwiimpahla ozikhethayo. Umzekelo, ukuthwala ibhola yesilayidi: I-1,500 ukuya kwi-3,000,000 / ubungakanani, i-hinge: ii-PCs ze-30,000 ukuya kwi-PCS / Model: Imodeli ye-3,000 ukuya kwi-3,000 yeemodeli kunye ne-1,000 yemodeli kunye ne-1,000 yemodeli kunye ne-3,000 i-PCS ...
Singazazi njani umgangatho ngaphambi kokubeka i-odolo yetyala?
Okokuqala, siya kubonelela ngeesampulu zasimahla ngaphambi kokubeka i-odolo yakho yokuvavanywa komgangatho, emva kwexesha locwangco loku-odola siya kuphinda sijonga iinkcukacha zemveliso kwakhona. Kwaye sihlala sinolawulo olusemgangathweni ngexesha lemveliso yethu yokuphepha ingxaki esemgangathweni. Ngaphandle, sinokuhamba ngokusemgangathweni osekwe kumgangatho welizwe olwahlukileyo ukubonisa umgangatho wethu osisibonisa ukuba uza kuba yeyona nto iphambili kuwe.
Singazifumana njani iisampulu kuwe?
Siza kunika iisampulu zasimahla ngaphambi kokuba ubeke iodolo, kuya kufuneka uhlawule i-hyight kuphela, usebenzisa i-akhawunti yakho ye-Express okanye ulungiselele inkonzo yakho.
Lide kangakanani ixesha lokuhanjiswa?
Singazazi njani ulwazi olungakumbi ngokupakisha?
Singumthengisi we-OBM we-OBM ukupakisha njengeendlela zethu eziqhelekileyo ukuba akukho zifungo zikhethekileyo zokupakisha, ngesiqhelo siza kuprinta u-Lod "wongeza" uphawu lwepakethi kunye nokupakisha kwangaphakathi. Ukongeza, sinokubonelela ngenkonzo ye-OEM ye-OEM kwisicelo somthengi, kodwa kuya kubakho i-moq enkulu kunendlela eqhelekileyo. Ukuba ufuna naziphi na iinkonzo zokupakisha esinokubonelela, nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngokubonisana, siyakholelwa ukuba siza kukwenza isisombululo esonelisayo.
Nguwuphi umthamo wokulayisha kwe-20ft ye-20 kwaye kunokwenzeka ukuba ulayishe imveliso yokuxuba kwisitya esinye?
Ithini ixesha lokuhlawula?
Yintoni esifanele siyenze ukuba iziphene ezisezantsi zenzekile emva kokuba zifumene iimpahla?
Nceda usithumelele iifoto ngenkcazo eneenkcukacha nge-imeyile okanye ezinye iindlela, izongezelelo ziya kukusombulula kwangoko, ukuba bekungakhathali kwethu, siya kuhlawuliswa ukutshintshwa okanye ukutshintshwa simahla. Sibonelela ngenkonzo ethembekileyo neyexesha elifanelekileyo yokuthengisa ukuphumelela ukuthembana kwabathengi abaninzi nabatsha, kufuneka waneliseke yi-odod.
I-Hydraulic hinge i-hinge ye-hinge yesiseko se-3D ye-V-SME SME SMEBISO xa ithelekiswa neemveliso ezifanayo kwintengiso, ineengenelo ezingenakuthelekiswa nanto ngokwendlela yokusebenza, inkangeleko ebonakalayo kwimarike.Addith ishwankathela iziphene ze iimveliso zangaphambili, kwaye uqhubeke ngokuqhubekayo. Inkcazo ye-Hydraulic hinge i-Hinge Clip-kwi-3D engaphantsi ye-V-Dament ye-V-Damement ye-V-DameS inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.I-Hardid Council Homedware Hydraulic indlela ezimbini ze-Hinge Ship-Vula uhlengahlengiso lwe-3D ukusuka kwi-Operth Horedwation kunye nexabiso elinexabiso lenkqubo ye-Hinge kunye neNkonzo yeSisombululo seZicwangciso-nkqubela.
Ukuvala okuthambileyo kwi-3 okanye ibhola ethambileyo xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo kwimarike, ineengenelo ezingekapheshelwa ngokwendlela, umgangatho, inkangeleko entle, njl njl. kwaye uqhubeke ngokuqhubekayo. Inkcazo yokuvala okuthambileyo ukuvala i-3 okanye ibhola ethwele ibhola inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.I-Csala Wardrobe yeKhaya lokuvalela okuKhawulezileyo kwi-Clawer Ukuvalwa kwezixhobo ze-boods kunye nexabiso le-CRORDECH kunye nexabiso le-Hinge.
I-hydraulic hinge i-hinge | I-Adj Thumeniswa neemveliso ezifanayo kwintengiso, inezinto ezingenakuthelekiswa nanto ngokusetyenziswa komsebenzi, umgangatho, ukubonakala, njl njl., Njani. Inkcazo ye-hydraulic hinge i-hinge Yongeza ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.I-Hardraware yeKhabhidi yeHardraulic hinge i-hinge ye-hinge kwi-Operth Horedware ye-Open Cardware kunye nexabiso elisebenzayo.
Ibhola ekhatywayo emithathu ethwele i-slide ifake i-slide ithelekiswa neemveliso ezifanayo kwintengiso, ineengenelo ezingenakuthelekiswa nanto ngokwendlela yokusebenza, umgangatho, inkangeleko ebonakalayo kwintengiso yentengiso. bayaziphucula. Inkcazo yesilayidi sebhola esithathu esinebhola esinebhola esinebhola esinebhola inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.I-Crawer yeKhaya leShedRobe Ibhola ekhatywayo ye-Drawer ephethe izilayidi zeHardith ukusuka kwi-Operth Hored kunye nexabiso elinexabiso lenkqubo ye-Hinge kunye nenkonzo yokumisa i-HIGE.
Eyona nto ibaluleke kakhulu yentsimbi
Isibambo sohlobo lwentsimbi engenasitayile xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo kwintengiso, ineengenelo ezingenakuthelekiswa nanto ngokwendlela yokusebenza, umgangatho, inkangeleko entle yentengiso. zona. Inkcazo ye-stainess yentsimbi yentsimbi inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.Umnyango webhajare ye-WOKUGQIBELA SS304 / SS01
Eyona nkampani yentsimbi ye-itayitha ye-itayitha ye-tall
Umlenze wensimbi ojikelezayo xa uthelekisa iimveliso ezifanayo kwintengiso, ineengenelo ezingenakuthelekiswa nanto ngokwendlela yokusebenza, umgangatho, imbonakalo, njl njl. . Inkcazo yomlenze wefanitshala enesinyithi inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.I-O-Rings i-SOAF ye-SOFOD yensimbi ye-Infor yeBig yeBig kwi-Operth Shoreware nge-Craft ye-Odd kunye nexabiso leNkqubo yokuSebenza yeHinge kunye nenkonzo yokumisa impahla enye ye-HIGE.
Isikwere esiyintloko sentloko ye-robertson
I-Flat i-Square Square Squelt Screw Screw ithelekiswa neemveliso ezifanayo kwimarike, ineengenelo ezingenakuthelekiswa nanto ngokwendlela yokusebenza, inkangeleko yesiphene semveliso yangaphambili, kwaye qhubeka ubaphucula. Inkcazo ye-flat yentloko yesikwere i-robertson ye-robertson inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.I-Squeral Square Squelt Screw Screw Screware ye-Open Hored kunye nexabiso elinexabiso leNkqubo yokuSebenza kunye neNkonzo yeSisombululo se-Hinge yeHardware.